सम्पर्क व्यक्तिको नाम
हामीलाई कल गर्नुहोस् हामीलाई कल गर्नुहोस्
जूम सेवाको परिचय
जूम आधुनिक इन्टरप्राइज भिडियो संचारहरूमा लिडर साबित भएको छ। जूम भिडियो र अडियो कन्फरेन्सिंग, सहकार्य, च्याट र वेबिनारहरूको लागि सजिलो र भरपर्दो क्लाउड प्लेटफर्म हो।
प्रयोगकर्ताको अनुभवलाई सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले एटलस नेपाल, (प्रख्यात वितरक / एजेन्सी) को सहयोगमा हाम्रो उत्पाद पोर्टफोलियोमा जुम सेवा थपेका छौं। हाम्रो मूल्यवान ग्राहकले अब वर्ल्डलिंक मार्फत जूम सेवा सदस्यता लिन सक्दछन।
इन एसोसीयेसन्स विथ
जुम मिटिङ्गसहरु ज़ूमको आधार हुन् र जूम भन्नाले भिडियो कन्फरेन्सिंग मीटिङ्स भनेर भुझिन्छ। जूम मीटिङ्हरुमा भाग लिन हामीसँग जूम खाता हुनुपर्दैन, हामी हाम्रा ग्राहकहरूसँग मीटिङ्स राख्न सक्दछौं वा टाढाको उम्मेदवारहरूसँग अन्तर्वार्ता लिन सक्दछौ।
सेटअप,प्रयोग र प्रबन्ध गर्न सजिलो
एकल प्लेटफर्म बैठक, वेबिनार र च्याट
कुनै पनि डिभाईसमा, कहिँ पनि सामेल हुन सकिने
शक्तिशाली बैठक सुरक्षा
जूम प्रो प्लान
सानो टोलीका लागि एकदम राम्रो
१०० सहभागीहरू होस्ट गर्न सकिने
३० घण्टा सम्म ग्रुप मिटिङ्ग गर्न सकिने
सामाजिक मीडिया स्ट्रीमिंग
१ जीबी क्लाउड रेकर्डिंग (प्रति लाइसेन्स)
रु २३,३५५ /प्रति होस्ट /प्रति वर्ष (न्यूनतम १ होस्ट)
जूम बिजनेस प्लान
सानो र मध्यम व्यापारहरू
३००० सहभागीहरू होस्ट गर्नुहोस्
रु २८,२४१ /प्रति होस्ट /प्रति वर्ष (न्यूनतम १० होस्ट)
जूम इन्टरप्राइज प्लान
मिटिङ्ग, फोन, कुराकानी
कर्पोरेट URL अनुरोध
हाइब्रिड क्लाउड सेवा
रु ३२,९४८ /प्रति होस्ट /प्रति वर्ष (न्यूनतम ५० होस्ट)
नोट:कुनै पनि मुल्यमा VAT जोडीएको छैन।
जूम भिडियो वेबिनारहरू
१०० अन्तर्क्रियात्मक भिडियो प्यानलिस्टहरू
प्यानलिस्टहरूबाट स्क्रिन सेयरिंग (अडियोको साथ भिडियोहरू)
Q&A प्रश्नहरुलाई मनपराउन र भोट गर्न सक्ने
सहभागी र वेबिनार प्रदर्शन रिपोर्टिंग
प्यानलिस्टहरू म्यूट / अनम्यूट गर्नुहोस्
सहभागीहरूलाई प्यानलिस्ट हुन प्रोत्साहित गर्नुहोस्
सेतो बोर्डिङ र एनोटेशन उपकरणहरू
अनुकूलन योग्य ब्रान्डेड दर्ता पृष्ठहरू
पूर्व र पोस्ट-वेबिनर रिमाइन्डर ईमेलहरू
पोस्ट इभेन्ट सर्वेक्षण लिंक
रेकर्डिङ र ट्रान्सक्रिप्ट्स टूलटिप आइकन
YouTube,फेसबुक लाइभमा असीमित दर्शकहरूको लागि प्रत्यक्ष स्ट्रिमिइङ।
पे पाल एकीकरण
लाईसेन्स प्राप्त प्रयोगकर्ता र सहभागि भनेको के हो?
लाईसेन्स प्राप्त उपयोगकर्तासँग नि: शुल्क वा भुक्तान गरिएको मिटिङ्ग लाईसेन्स हुन्छ र मिटिङ्ग लाईसेन्स भएको ब्यक्तीले कसैलाई मिटिङ्गमा आमन्त्रित गरेको छ भने उस्लाई सहभागि भनिन्छ। एक सहभागीले मिटिङ्गमा सम्मिलित हुन को लागी जुम खाता वा लाईसेन्सको आवश्यक पर्दैन र नि: शुल्क सम्मिलित हुन सक्दछ। सहभागीहरू उनीहरूको फोन, डेस्कटप, मोबाइल र ट्याब्लेट उपकरणहरूबाट मिटिङ्गमा सम्मिलित हुन सक्छन्।
कति जना सहभागी मिटिङ्गमा सामेल हुन सक्छन्?
सबै योजनाहरूले प्रत्येक बैठकमा पूर्वनिर्धारित रूपमा १०० सहभागीहरू (ठूलो बैठक एड-अनको साथ १,००० सम्म) लाई अनुमति दिन्छ।
एउटा मिटिङ्ग लाईसेन्स कती जनाले प्रयोग गर्न सक्दछन्?
तपाईं असीमित मिटिङ्गहरू होस्ट गर्न सक्नुहुनेछ तर यदि तपाईं एक भन्दा बढि मिटिङ्ग गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंलाई थप मिटिङ्ग लाईसेन्सको आवश्यक पर्दछ।
सामान्य र प्रो प्लानहरु बीच के फरक छ?
जूमको सामान्य प्लानमा हामीले असीमित र नि: शुल्क मिटिङ्गस् गर्न सक्छौ। जूममा परीक्षण समय नभएको हुनाले आफुले चाहे जती जूम प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामान्य प्लान होस् वा प्रो प्लान दुबै प्लानमा हामीले असीमित १-१ मिटिङ्गस् गर्न सक्छौ। प्रत्येक मिटिङ्गस्को अधिकतम २४ घण्टाको अवधि हुन सक्छ। सामान्य प्लानमा प्रती मिटिङ्ग ४० मिनटस समय लिमिट हुन्छ र ३ वा बढीले सहभागीता जनाआउन सक्छन। तर तपाईंको ग्रुप मिटिङ्गस् लाई ४० मिनटस भन्दा बढी आवश्यक छ भने तपाईंले प्रो अकाउन्ट मा साइन अप गर्नु पर्ने छ ।
जुमले कसरी प्रोडक्ट सुरक्षित राख्छ?
Securing your Zoom Meetings can start before your event even begins, witharobust set of pre-meeting features, including Waiting Rooms, Join by Domain, and Passcodes. Zoom also has controls at your fingertips to ensure your meetings are secure and disruption-free. Zoom takes care to ensure your data is secure at all times using learn more about our privacy and security features here.